पाइलटका साथीले खोले दुर्घटनाको वास्तविक कारण, भने कम्पनीले थकित अवस्थामा पनि जबर्जस्ती उडान भर्ने लगाउथ्यो(भिडियो सहित - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»पाइलटका साथीले खोले दुर्घटनाको वास्तविक कारण, भने कम्पनीले थकित अवस्थामा पनि जबर्जस्ती उडान भर्ने लगाउथ्यो(भिडियो सहित
पाइलटका साथीले खोले दुर्घटनाको वास्तविक कारण, भने कम्पनीले थकित अवस्थामा पनि जबर्जस्ती उडान भर्ने लगाउथ्यो(भिडियो सहित
By मनिषा थापा on ५ चैत्र २०७४, सोमबार १०:५८ समाचार
यूएस-बंगला एयरलाइन्सको विमान काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि यसको कारण खोज्ने क्रम जारी छ । यसैबीच एक बंगलादेशी पाइलटको भनाइमा भने यो दुर्घटना अवश्यम्भावी थियो । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ती पाइलटले जागिरको सुरक्षाका कारण आफ्नो नाम खुलाउन मानेनन् । उनले आफ्ना सहकर्मी पाइलटलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘उक्त दुःखद दुर्घटनाले पर्खिरहेको थियो ।’
मलाई थाहा छ,पाइलटहरुलाई जोखिमयुक्त अवस्थाहरुमा पनि उडान गर्न व्यवस्थापनले दबाब दिन्छ । उडानको सुरक्षामाथि व्यवसायिक स्वार्थहरु हाबी हुन्छन् ।मैले हाम्रा फस्र्ट अफिसरहरुबाट धेरै निराशाजनक कुरा गरेका थिए.उनले आफुले कहिलै नाइँ नभन्ने बानी रहेको बताएका थिए यसकारण आफु धेरै समस्यामा परेको भनेर भन्ने गरेको भनेका छन्.
क्याप्टेन अबिदका छोराछोरीहरुले उनीहरुका बाबुलाई कहिल्यै देख्न सक्ने छैनन् । \_ मुटु टुक्रा-टुक्रा भएको छ । उनको ठाउँमा म हुन सक्थेँ, निजी विमानहरुले न्यूनतम भिजिबिलिटीभन्दा कममा, खराब मौसममा उडान गर्ने, प्राविधिक समस्याहरुमा सम्झौता गर्ने, मौसम राडारविना नै उडान गर्ने, पाइलटहरुलाई इन्जिनियरिङ लगमा प्रवेश नदिने आदि प्रवृत्ति छन् । उनीहरुका लागि सुरक्षाभन्दा पैसा धेरै महत्वपूर्ण छ । यो पटकपनि येस्तै गरेको गुनासो गरेका छन्.
अरु विदेशी विमानहरु जाडोमा भिजिबिलिटी सुधार हुने प्रतिक्षामा होल्ड गरिरहेको देखेको तर यूएस बंगलाले भने यस्तो अवस्थामा पनि अवतरणको लागि तयार हुन्छ । सबै पाइलटहले आफ्नो कामको प्रभाव कति ठूलो हुन्छ भन्ने महसुस गर्नुपर्छ । यदि सबै एकजुट भए व्यवस्थापनले खराव मौसम वा प्रतिकुल अवस्थामा उडान गर्नका लागि दवाव दिन सक्दैन । क्याप्टेन अबिद सुल्तान काठमाडौं एयरपोर्टमा जानुअघि चारवटा क्षेत्रमा उडान गरिसकेका थिए । कति दुखलाग्दो ? त्यो पनि केवल दुई महिनाको अनुभव भएको फस्र्ट अफिसरसँग । विमानहरुले यस्ता अनुभवहीन फस्र्ट अफिसरहरुलाई नजिकै उडान भर्ने अनुमति समेत दिँदैनन् ।
हेर्नुहोस भिडियोमा यस्तो गर्ने रहेछ बंगला बिमानले,उनिसंगै काम गरेका साथीले यस्तो भने